Wasiirka Arrimaha Gudaha Oo La Kulmay Guddiga Dib U Eegista Dastuurka Ee Baarlamaanka – Kalfadhi
Xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo uu hor-kacayo wasiir Cabdi Maxamed Sabriye ayaa kulan wadatashi ah la qaatey guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya.
Kulankaan ayaa ahaa kala warqaadasho ku saabsan halka ay marayaan howlaha dib u eegista dastuurka iyadoona kullanka looga hadley shantii cutub ee dastuurka oo dhowaan ay soo gudbiyeen guddiga madaxa banaan iyo la socodka dastuurka.
Kulanka wasiirka iyo guddiga
Guddiga ayaa kala hadley wasiirka iyo xubnaha kale ee ka socdey wasaaradda arrimaha ku jira shantaas cutub ee la soo gudbiyey isla markaana khuseeya wasaraadda arrimaha gudaha oo ay ka mid yihiin arrimaha federaalka, doorashooyinka, jinisiyadda, awood qeybsiga, qaab dhismeedka dowlad goboleedyada, maqaamka caasimadda iyo kuwo kale.
xubnaha guddiga oo shirka fadhiya
Wasiirka arimaha gudaha ee XFS mudane Cabdi Maxamed Sabriye oo warbaahinta la hadley ayaa sheegey in guddiga ay kala hadleen halka ay marayaan howlaha dastuurka iyo sidii loo dardar gelin lahaa dhammeystirkiisa iyo waxyaabaha ku jira 5-ta cutub ee wasaaradda arrimaha gudaha sida gaarka ah u khuseeya.
“ Waxaa aan qaadaney kulan ra’yi isweydaarsi ah sidoo kale waxa aan isla wadaagney meesha ay mareyso howlaha wasaaradda gaar ahaan kuwa khuseeya ama la sugayo in ay hirgalaan si ay qeyb uga noqdaan qoraalka dib u eegista dastuurka” ayuu yiri wasiir Sabriye.
Wasiir Sabriye oo warbaahinta la hadlaya
Guddoomiyaha gudiga la socodka iyo dib u eegitsta dastuurka ee BJS mudane Sanatar Cabdi Xasan Cawaaale Qaybdiid ayaa u mahadceliyey madaxda wasaaradda islamarkaasna sheegey iney muhiim tahay in gudiga iyo hay’adaha dowladda ee arrimaha dastuurka dib loo eegaayo ay khuseeyaan iney ka wada shaqeeyaan.
“ Waxaan u mahadcelinayaa wasiirka, wasiiru dowlaha, wasiir ku xigeenka iyo howl wadeenada la socdey, labada dhinac ee gudiga iyo wasaaradda hal shaqo ayan wada hayney hay’adaha kale ee dowladdana waxaan ka codsaneynaa in ay nala shaqeyaan” ayaa ka mid ahaa hadallada Sanatar Qaybdiid.
Gudiga madaxa banaan ee la socodka iyo dib u eegista dastuurka ayaa dhowaan soo gudbiyey shan cutub oo dib u eegis ay ku soo sameeyeen iyadooona gudiga dastuurka ee BFS ay dhowaantaaba kulamo la xiriira arrintaan ay ka yeelanaayeen.
W/Q: Maxamed Shariif.